मु’ख गन्हाउने स’मस्या छ ? नसोच्नुहोस् सा’मान्य, हुनसक्छ गंभिर रो’गको संके’त – jagritikhabar.com
१) क्या’न्सर: लामो समयसम्म चु’रोट तथा खै’नीको सेवन गर्ने मानिसहरुमा मुखको क्या’न्सर हुने सम्भावना अधिक रहन्छ । यस्तोमा उनीहरुको मुखबाट नराम्रो गन्ध आउने गर्छ। २) फो’क्सोको संक्रमण: कयौ मानिसहरु सास गन्हाउने स’मस्यालाई सामान्य नै मान्ने गर्दछन् । जबकी फो’क्सोको संक्रमण भएमा पनि मु’खबाट गन्ध आउने गर्छ।
३) क’लेजोको संक्रमण: शरीरको महत्वपूर्ण अंगहरुमध्ये क’लेजो पनि एक हो । क’लेजोले खानालाई पचाउन सहयोग गर्दछ। तर क’लेजोको संक्रमण भएको खण्डमा यसले राम्ररी काम नगर्दा अपचको स’मस्या उत्पन्न हुने गर्छ। जसका कारण मुख तथा सासबाट गन्ध आउने गर्छ। ४) मृ’गौलाको स’मस्या: मृ’गौलाको स’मस्याका कारण शरीरमा मेटाबोलिक परिवर्तन देखा पर्दछ । जसले गर्दा शरीरमा मुख सुख्खा हुने स’मस्या आउने गर्छ , जसका कारण मुखबाट गन्ध आउने गर्छ।
५) गि’जाको स’मस्या: जिगाको स’मस्याका कारण पेरिओडोन्टिक नामक रो’ग लाग्ने गर्छ । जुन मुख गन्हाउने स’मस्याको कारण बन्न सक्छ। ६) मधुमेह: म’धुमेहका कारण शरीरमा मेटाबोलिक परिवर्तन देखा पर्न थाल्छ । जसको कारण मुख गन्हाउन थाल्छ । ७) संक्रमण: सही तरीकाले दाँ’त नमाझेको खण्डमा दाँतमा व्याक्टेरिया जम्मा हुन थाल्छ । जसका कारण मुखमा संक्रमण भई मुखबाट गन्ध आउने गर्छ ।
यस्ता स’मस्याबाट बच्नको लागि यी कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । रुयदी कसैलाई विहान बेलुकी राम्ररी ब्रस गर्दा पनि मुख गन्हाउने स’मस्या छ भने । मुखको भित्र, गि’जा वरिपरि तथा गालातिर ठूलो घाउ छ भने । मुखको राम्ररी सरसफाई गर्दा पनि मुख गन्हाउने स’मस्या भइरहन्छ भने । मुखमा रातो, सेतो वा कालो घाउ छ भने । दातलाई पाच भागमा बाडेर तल, माथि, दाया बाया तथा दातको टुप्पोमा राम्ररी सफा गरेर पनि फेरी डेन्टल चिकित्सकद्धारा दातको सफाइ गर्दा पनि मुख गन्हाउने स’मस्या कम नभएमा ।
सबैभन्दा पहिले दात विशेषज्ञका जानु आवश्यक छ । यदी दातको सम्पूर्ण चेकजाचका बाबजुद यदी कसैको मुख अन्य कारणले गन्हाउछ भने दात विशेषज्ञको सुझाव अनुसार फिजिसियनसितको परामर्श आवश्यक छ । अन्यथा, मुख तथा शरीरका अन्य भागको जटिल स’मस्या समेत उत्पन्न हुन सक्छ । जबकी दात तथा मुखको राम्ररी हेरचाह गरेको खण्डमा मुखको मात्र नभई शरीरमा अन्य स’मस्या समेत नआउने डा. घिमिरे बताउँछन् ।